Afaka manampy ahy amin'ny tranonkala tsara indrindra ho an'ny backlinks amin'ny media sosialy ve ianao?
Eny, maro ireo tranonkala media sosialy samihafa sy tranonkala malaza amin'ny pejy PageRank sy DA (tompon'andraikitry ny sehatra), izay mety ho tena tombontsoa amin'ny toerana hifandraisana amin'ny. Alohan'ny hamerenana ny tranonkala tsara indrindra ho an'ny backlinks amin'ny media sosialy, mariho fa etsy ambany dia hasehoko anao ny lehibe indrindra - satria mety efa fantatrao ny lionan'ny lionan'ireo tambajotra feno. Noho izany, andeha hojerentsika ny fomba hananganana ny fanatrehanao an-tserasera sy ny fomba tokony hamokaranao ireo lahatsoratra ifaneraserana. Raha ny marina, ny zavatra rehetra ilainao dia ny hanomezana lanjany bebe kokoa ny lahatsoratrao. Tadidio fa tsy maintsy manome sarany fanampiny amin'ny votoatiny ianao. Ny zavatra dia ny hoe tokony ho sarobidy ny lahatsoratry ny asa soratranao ao amin'ny media sosialy ary mifanaraka amin'ny tombontsoanao. Ankoatra izay, mino aho fa ny fanaovana ny zavatra rehetra azo zaraina sy ny fandraisana rohy amin'ny fomba azo atao dia ny hany fomba hivelomana sy hijanona amin'ny fifaninanana mafy indrindra amin'ny fitondrana ny tontolo maoderin'ny media sosialy. Ho an'ity fotoana ity, andeha hojerentsika ny habaka tsara indrindra ho an'ny backlinks any.
Ity tambajotra malaza ity dia mety ho anisan'ny tranonkala tsara indrindra ho an'ny backlinks amin'ny media sosialy. Raha ny marina, LinkedIn dia manana toerana maro samihafa mamela ny varavarana misokatra mba hamoronana rantsana rohy ho an'ny lanjany. Eto ianao dia afaka manampy rohy amin'ny rohy, ary koa ny rohy mankany amin'ireo lahatsoratra tsy tapaka, ary ny antsipiriany amin'ny tranonkalan'ny anao.
Pinterest dia mampiseho ny sisiny matanjaka indrindra rehefa tonga ao amin'ny votoatim-pikirakirana tsara indrindra, toy ny DIY. Ity sehatra ity dia tsara ihany koa ho an'ny fanavaozana ny ampahany amin'ny votoatiny tsotra ao anaty lahatsoratra ho an'ny zavatra hita maso sy hita maso nefa mbola mampahalala, i. f. , infographics, spreadsheets, sy ny sisa. Soso-kevitra: Amin'ny fampiasana Pinterest hanamboarana rohy momba ny tetikasam-pandrafetana ankapobeny dia mety hisy vokany mahavariana, koa aza misalasala ny hampifandray an'ity iray ity amin'ny tranonkala tsara indrindra ho an'ny backlinks.
Matetika matetika ity sehatra ity dia matetika no tsy raharahaina. Noho izany dia zara raha misy ny tranonkala tsara indrindra ho an'ny backlinks amin'ny media sosialy. Ary ny zava-drehetra dia ny hoe Instagram dia mety ho lasa tena volamena tokoa - raha toa ka manana sary tsara tarehy ianao ary hevitra saro-bidy, mamolavola ny votoaty hita maso. Mariho anefa fa ireo mpizarazara dizitaly izay niampita tany dia nahatonga ity toerana ity ho tena sarotra izay nahazo ny fifaninanana tsena.
Fotoana vitsy lasa izay, ny rohy sasany amin'ny profil sasany, sy ireo ao amin'ny Google+, dia mety manana lanjany bebe kokoa noho ny rohy normal. Mazava ho azy, ity hadalava ity dia nesorina tamin'ny alàlan'ny fanavaozana algorithm Panda farany indrindra. Na eo aza izany, ny sehatra ara-tsosialy amin'ny andian-jiolahim-boto manerantany dia mbola mendrika ny hamotika ireo rohy sarobidy amin'ny toe-javatra rehetra. Tsarovy fotsiny - ny fampifandraisana amin'ny Google+ dia fomba iray efa voaporofo fa mora ampiasaina haingana kokoa.
Izany tokoa! Nahita izao fomba mahomby izao izahay tamin'ny fananganana backlinks. Raha jerena fa ny fampiasana Tumblr amin'ny famoronana rohy dia tena asa goavana. Na dia izany aza dia mendrika ny manandrana ny tenanao amin'io loharano malaza io ianao - raha vantany vao nahazo lohamilina tsara ianao ary nahatonga azy hivezivezy, dia afaka manangana fifandraisana amin'ny rohy tsy misy fetrany ianao mandritra ny taona maro - noho ny tsy fahampian'ny tambazotra eo amin'ny tumblr Source .